Banco Itaú 6.9.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 6.9.2 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
အဘယ်အရာကိုသင်ရှာနေလဲ? သင့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့ပိုပြီးလုံခြုံရေးနှင့်သွက်လက်? Itaúဘဏ်လျှောက်လွှာနှင့်အတူကဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အနည်းငယ်ကလစ်အားဖြင့်သင်တို့ကို, ထိုကဲ့သို့သောစစ်ဆေးမှုများချိန်ခွင်လျှာအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောဘဏ်လုပ်ငန်းကိစ္စများကို, လုပ်ဆောင်ငွေစုအကောင့်ကိုရွှေ့, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးချေးငွေအောင်နှင့်ဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်နိုင်ပါ။
Itaúဘဏ်လျှောက်လွှာက၎င်း၏လျင်မြန်ပြီးလွယ်ကူအကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနိုင်ပါတယ်။ သင်, သင့်အကောင့်ကိုဝင်ရောက်ဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်, သင့်ငွေထုတ်ယူဘယ်နေရာမှာမဆိုကဒ်နှင့်အချိန်ပေါ်တွင်သင်၏ဟန်ချက်နှင့်အရောင်းအစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ လွှဲပြောင်းနှင့်သင့်အကြွေးဝယ်ကဒ်၏ထုတ်ပြန်ချက်များ: ကိုလည်းဘဏ်ဖွင့်လျှောက်လွှာတွင်ရရှိနိုင်ပါကအခြား features တွေရယူသုံးပါ။
သငျသညျItaúကီးဘုတ်မြင်ပြီလော Itaúကီးဘုတ်တစ်အသစ်အဆန်းများနှင့်ဘဏ်လျှောက်လွှာတစ် differential ကို, သင်တို့အဘို့ဖန်တီးအသစ်တစ်ခု feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနှင့်တကွ, လွှဲပြောင်း app ကိုဝင်ရောက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းမပါဘဲဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏ဘဏ်အကောင့်ရွှေ့ကူညီဖို့နောက်ထပ်Itaúဘဏ်အင်္ဂါရပ်။
Itaúဘဏ်လျှောက်လွှာနှင့်အတူသငျသညျချိန်ခွင်လျှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်, ငွေစုအကောင့်များနှင့်နည်းလမ်းများစွာအတွက်ငွေပေးချေမှုပါစေ။ သင်ကကင်မရာဖုန်းနှင့်ဘားကုဒ်ကိုစာဖတ်သူကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့ဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်သို့မဟုတ်တစ်တိုက်ရိုက် PDF ကိုအီးမေးလ်ကဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်နိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက်ရုံပုံနှိပ်ယူပြီးမပါဘဲ WhatsApp ကို, Facebook, Messenger ကို, SMS နှင့်တိုက်ရိုက်မေးလ်ဆဲလ်ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်ဖို့ဘောက်ချာပေးပို့ပါ။
သင်တို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောကြောင်းကောင်းပြီ, ထိုဒေတာဘေ့စလျှောက်လွှာ! သူတို့၏လွှဲပြောင်းလုပ်နေအိမ်စွန့်ခွာစစ်ဆေးခြင်းကိုနှင့်ငွေစုအကောင့်အသစ်များ၏ချိန်ခွင်လျှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေး, ခရက်ဒစ်ကဒ်ထုတ်စစ်ဆေး, ဒက်ဘစ်ကဒ်ပစ်လွှတ်မြင်တောင်မှပုဂ္ဂိုလ်ရေးချေးငွေစေရန်လိုအပ်ပါတယ်မရှိတော့ကြံစည်ကြသနည်း
app ကိုနှင့်အတူသငျသညျ, ဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုစီမံခန့်ခွဲ, ချိန်ခွင်လျှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေး, လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးချေးငွေအချိန်မရွေးရပျရပျကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်နည်းလမ်းသစ်တစ်ခု!
သင်သည်မည်သည့်ဘဏ်ထဲမှာအကောင့်ရန်သင့်လွှဲပြောင်းဖျော်ဖြေဖို့အတှကျစူပါခေတ်သစ်လုပ်ဆောင်ချက်ကို။ သင်တစ်ဦးစကားပြောဆိုမှုထားခဲ့ပါနှင့်ငွေလွှဲပြောင်းရန်လျှောက်လွှာကိုပြောင်းလဲရန်မလိုပါ။ ဒါဟာအလွန်ရိုးရှင်းပြီးဖြစ်ပါသည်, ပဲ, ဖုန်းခလုတ်အိုင်ကွန်ကိုအသာပုတ်တန်ဖိုးရိုက်ထည့်ပါနဲ့အခြားစစ်ဆေးခြင်းကိုသို့မဟုတ်ငွေစုအကောင့်အရောင်းအဝယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်။
သင့်အကောင့်အပေါငျးတို့သလှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံ, နှစ်ဦးစလုံးဒက်ဘစ်ကဒ်အပေါ်ဝယ်ယူမှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ သင်ဒေတာဘေ့စလျှောက်လွှာကနေတိုက်ရိုက်ချင်နှင့်ဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်ဖို့အစီအစဉ်သည်အချိန်ဖြည်အပြင်သင့်လက်ရှိအကောင့်လက်ကျန်ငွေနှင့်ငွေစုနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
အဆိုပါဒေတာဘေ့စလျှောက်လွှာနှင့်အတူသငျသညျအကောငျ့ကိုစစ်ဆေးနေ, Itaúအကောင့်အတွက်အသံဖြင့်အမိန့်ပေးခြင်းဖြင့်လွှဲပြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်ငွေစုကိုမဆိုဘဏ်ထဲမှာအကောင့်။ သင်တို့သည်လည်း app ကိုမှာသင့်ရဲ့ကြိုတင်ငွေဖြည့်မိုဘိုင်းအားသွင်းနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါဒေတာဘေ့စလျှောက်လွှာ, သငျသညျ applications များနှင့်ချွေတာသုံးစွဲခြင်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုရွေးနှုတ်စေနိုင်သည်။ ရုံချိန်ခွင်လျှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်။ ထို့အပြင်ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အာမခံကိုသိ!
အခုတော့ချိန်ခွင်လျှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးItaú client ကိုဖြစ်ကြသည်သောသူတို့အဘို့လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ငွေပေးချေမှုပိုမိုလွယ်ကူစေပါသည်။ Itaúဘဏ် app ကိုနှင့်အတူသငျသညျပုဂ္ဂိုလ်ရေးချေးငွေအောင်, အငွေစုအကောင့်ချိန်ခွင်လျှာစစ်ဆေးနှင့်လျင်မြန်စွာနှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်နိုင်သည်!
ဖောက်သည်တစ်ဦးItaúဖြစ်ခြင်း၏အားလုံးအကျိုးကျေးဇူးခံစားပါ။ ယနေ့ Itau ဘဏ် application ကို Download လုပ်ပါ
Banco Itaú အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
natanaelbr စတိုး 4.06k 852.44k
APK ဗားရွင္း 6.9.2